Zanu PF Yoshushikana neKuputswa Kuri Kuitwa Dzimba?
Bato reZanu PF nhasi razivisa kuti raumba komiti ichange ichiona nezvekupihwa kwevanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba mushure memusangano waitwa nebato iri, makurukota ehurumende pamwe nevekanzuru yeGoromonzi zvichitevera kupwanywa kwakaitwa dzimba kuMelfort svondo rapera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda weZanu PF, munyori anoona nezvemari uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZanu PF, VaPatrick Chinamasa, vati bato ravo harisi kufara nekupwanyirwa kuri kuitwa vanhu dzimba dzavo mushure mekunge dzimba idzi dzavakwa zvisiri pamutemo.
Vati nekuda kwekuti vanhu vanofanira kugara mudzimba dzavo vasina kubatira hura mumaoko, VaChinamsa vati bato ravo raona zvakakodzera kuti riumbe komiti ichange ichingorora kuti vanhu havasi kugariswa munzvimbo dzisingabvumidzwe here uye komiti iyi ichange ichitungamirirwa naVaObert Mpofu.
Mashoko aVaChinamasa aya atsinhirwa nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, avo vati komiti iyi ichange ichisanganisira gurukota rinoona nezvedzimba, VaDaniel Garwe, gurukota rinoona nezvematunhu VaJuly Moyo, pamwe nemakurukota anoona nezvinoitika mumatunhu zvichienderana nekuti idunhu ripi rinenge riine dambudziko.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatswayo, vati zvaitwa neZanu PF izvi zvinoratidza kuti bato iri rave kuda kupindira mumafambisirwo anoitwa basa nemakanzuru vachiti makanzuru anofanira kushanda akazvimirira
VaChinamasa vakurudzira kuti mapurisa asunge vose vari kuita chikoronyera vachitengesa masitendi zvisiri pamutemo vachishandisa zita reZanu PF kusanganisira nhengo yeboka revechidiki mubato ravo VaRodger Pote avo vakatengesera vanhu masitendi kuMelfort vanhu ava vakazopwanyirwa masitendi avo.
VaChinamasa vati hurumende haifanire kumirira kuti vanhu vavake pasingabvumirwe yozopwanyira vanhu dzimba dzavo mushure mekurasikirwa nemari yavo vachivaka dzimba idzi.
VaChinamasa vati vose vakapwanyirwa dzimba dzavo kuMelfort vachaonekwa kuti voitwa sei vachishanda pamwechete nekanzuru yeGoromonzi.
Vatiwo avo vakavaka munzvimbo dzine varidzi vadzo dzisiri dzehurumende vanofanira kuripa varidzi venzvimbo idzi, kuburikidza nebazi rezvematunhu nemakanzuru, yowana kugadzirisa mapepa kuti nzvimbo dzinge dzichicherechedzwa pamutemo.
VaChinamasa vati vaudza VaGarwe kuti bazi ravo harikwanise kuita kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa vawane mapepa kana vasiri kushanda nebazi rinoona nezvematunhu.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nezvivakwa zvavo kusanganisira dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo pachirongwa chiri kuitwa nehurumende chekupwanya zvivakwa ichiti iri kuchenesa nyika.
Musangano uyu wapindwawo naVaJuly Moyo, munyori anoona kufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaObert Mpofu, VaGarwe, Amai Sithembiso Nyoni avo vanoona nezvemabhizimusi madiki, dzimwe nhengo dze politburo yeZanu PF dzinosanganira VaSydney Sekeramayi naVaDavid Parirenyatwa pamwe negurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland East, Amai Applonia Munzverengi uye vekanzuru yeHarare.